Impendulo eKhawulezayo: Ungayekisa njani ukuphuphuma kwamanzi kwiTanki yeentlanzi-iBikeHike
Ikhaya » Zomxube » Impendulo eKhawulezayo: Ungawayekisa njani amanzi ukuba aphuphuke kwiTanki yeentlanzi
Ndiwamisa njani amanzi am akwi-aquarium ukuba angabi ngumphunga?
Kuthatha ixesha elingakanani ukuba amanzi abe ngumphunga kwitanki yentlanzi?
Uzinzisa njani amanzi etanki yentlanzi?
Kutheni itanki yam yentlanzi iphuphuma ngokukhawuleza?
Kutheni itanki yam yentlanzi ilahlekelwa ngamanzi amaninzi kangaka?
Ngaba ndingagalela amanzi kwitanki yam yeentlanzi?
Ndingasongeza isilungisi samanzi ngelixa iintlanzi zisetankini?
Ngaba kufuneka ndigqume itanki yam yeentlanzi ebusuku?
Ifanele ukuba yintoni iqondo lobushushu itanki yentlanzi?
Wongeza njani amanzi kwitanki yentlanzi emva kokuyicoca?
Kufuneka ubephezulu kangakanani inqanaba lamanzi kwitanki yentlanzi?
Kufuneka nditshintshe kangaphi amanzi kwitanki yeentlanzi?
Ndiyigcina njani itanki yam yeentlanzi isempilweni?
Kufuneka uqale nini ukutshintsha amanzi?
Ngaba unokutshintsha amanzi e-aquarium rhoqo?
Ndazi njani ukuba itanki yam yentlanzi yonwabile?
Uwaphatha njani amanzi etankini?
Uwaphatha njani amanzi entlanzi?
Ambi kangakanani amanzi etephu kwiintlanzi?
Kufuneka zondliwe kangaphi iintlanzi?
Kufuneka ulinde ixesha elingakanani phambi kokuba wongeze iintlanzi ezininzi?
Ukugcina itanki yentlanzi ipholile Gcina i-aquarium yakho kude neefestile ezinelanga kwaye uyibeke kwindawo epholileyo yegumbi. Fumana isiciko setanki ukugcina ubushushu buncinci. Ukuba useta itanki entsha, khetha enye enomhlaba omncinci. Sebenzisa izibane ezinobushushu obuphantsi njengee-LED kwaye ungazishiyi izibane zetanki zikhanya ngalo lonke ixesha.
Ukuhamba komoya Ukuhamba koMphunga kuyacotha njengoko ukufuma okusemoyeni ngaphezu komphezulu wamanzi kunyuka. Yiyo loo nto ukongeza isiciko seglasi kwitanki yakho kunciphisa izinga lokuphuma kwamanzi. Umaleko womphunga phakathi komphezulu wamanzi kunye nesivalo seglasi wenza kubenzima ukuba kwenzeke umphunga.
Iklorini kwinqanaba le-2ppm (iinxalenye ngesigidi) malunga neelitha ezili-10 zamanzi ziyakuthatha ukuya kwiiyure ezili-110 ukuba zibe ngumphunga ngokupheleleyo. Kubalulekile ukuba uqaphele ukuba iimeko ezithile ezifana nokukhanya kwe-ultraviolet, i-aeration, kunye nokujikeleza okufanelekileyo kuya kukhawulezisa inkqubo yokuphefumula.
Gcwalisa itanki yakho malunga nesinye esithathwini ngamanzi obushushu begumbi asuka kwi-emele ecocekileyo. Ukugalela amanzi kwipleyiti okanye i-saucer ehleli kwigrabile kuya kunceda ukugcina igrabile kwindawo. Yongeza i-conditioner yamanzi, njenge-Tetra® AquaSafe® Solution, ukukhupha i-chlorinate emanzini. I-Chlorine ilungile kuwe, hayi intlanzi yakho!
Umphunga wamanzi etanki yeentlanzi uqhelekile; nangona kunjalo, kukho iindlela zokuyithothisa. Ubushushu ngoyena nobangela wokuphuphuma kwamanzi, ngoko ke ubushushu buncinci, bungcono. Ukushisa okukhulu akwenzi nje ukuba amanzi aphume ngokukhawuleza, kodwa kubangela ukuba i-metabolism yentlanzi yakho ikhawuleze, yongeza i-toxins kwi-tank kwaye igxininise intlanzi ngaphandle.
Umgangatho wamanzi we-aquarium yakho uya kutshintsha. Uninzi lweziganeko zokuhla kwamanqanaba amanzi kukumka nje komphunga, okudla ngokubangelwa ngamaqondo obushushu aphezulu kwiindawo ezishushu. Ukuba une aquarium engaphezulu evulekileyo cinga ukusebenzisa itreyi yokuphuphuma komphunga ehlotyeni ukunciphisa ilahleko yamanzi.
Gcwalisa i-emele ecocekileyo malunga nesibini kwisithathu ukuya kwisithathu kwisine esigcwele ngamanzi. Kancinci ugalele amanzi akwi-emele kwipleyiti ekwi-aquarium. Phinda amanyathelo amathandathu kunye nesixhenxe de itanki izaliswe ngamanzi. Yongeza izityalo kunye nemihlobiso.
Unokongeza i-conditioner yamanzi emanzini kunye neentlanzi kuwo ukuba ususa kuphela inxalenye encinci yamanzi. Ukuba utshintsha amanzi ngokupheleleyo, kufuneka ungeze i-conditioner yamanzi emanzini ngaphambi kokuba ungeze intlanzi ukuze ugweme intlanzi enetyhefu kwi-chlorine, i-chloramine, okanye i-ammonia.
Ukuba uneentlanzi ezitsibayo, kuyacetyiswa ukuba ugqume itanki yakho, hayi nje ebusuku kodwa nasemini. Ngaphandle koko, isiciko setanki yakho yeentlanzi siyimfuneko kuphela ebusuku ngaphakathi kwegumbi le-aquarium apho ubushushu be-ambient bunokuphakama ngokwaneleyo ukukhupha amanzi kakhulu.
Ngaphandle kweentlobo ezithile zamanzi abandayo, uninzi lweentlanzi zase-aquarium zifuna amanzi ashushu. I-Bettas, i-discus kunye nezinye iintlobo zeentlobo zihamba kakuhle emanzini aphakathi kwe-76 ° kunye ne-85 ° F, uninzi lwezinye iintlanzi zetropikhi zikhetha uluhlu lwama-75 ° kunye nama-80 ° F, kwaye i-goldfish yenza ngcono ukusuka ku-68 ° ukuya kuma-74 ° F.
Emva kokuba ugqibile ukucoca itanki yakho, ungaphinda uyigcwalise itanki ngamanzi amatsha. Qinisekisa ukuba amanzi amatsha owafakileyo etankini sele eyisusile iklorini kusetyenziswa unyango oluyiconditioning. Eli lixesha kuphela kufuneka ungeze amanzi kwitanki yeentlanzi.
Ngokuqhelekileyo kufuneka ugcwalise itanki ukuya kwi-intshi engaphantsi kwe-trim ngenxa yokuba umhlathi wamanzi kunye nenkqubo ye-aeration iya kudala amaqamza atshiza umphezulu. Xa umzila wamanzi uphezulu kakhulu, amanzi angatshiza ngaphandle kwetanki.
IiNgcebiso ezili-10 eziPhambili zokuGcina iAquarium esempilweni Lungiselela kakuhle amanzi akho. Lungisa intlanzi yakho emanzini. Iintlanzi ezidadayo engxoweni yazo. Gcina ibhalansi ye-pH kunye namanye amanqanaba ekhemikhali. Qinisekisa ukuba ubushushu bamanzi bulungile. Guqula amanzi rhoqo. Coca iglasi yetanki kunye nezinye izakhiwo. Khetha ubungakanani obufanelekileyo kwitanki yakho.
Yenza i-25% yokutshintsha kwamanzi emva kweentsuku ezili-15. Khumbula ukunyanga amanzi etephu nge-Aqueon Water Conditioner ngaphambi kokuba uwafake kwi-aquarium yakho. Kukho iifilosofi ezahlukeneyo malunga nokuba mangaphi kwaye kaninzi kangakanani ukutshintsha amanzi, kodwa i-10% ukuya kwi-25% nganye kwi-1 ukuya kwiiveki ezi-2 ngumgaqo olungileyo wesithupha.
Ukuqukumbela, ewe unokwenza utshintsho oluninzi kakhulu lwamanzi. Ukuba wenza ngaphezu kwe-1 utshintsho lwamanzi ngosuku, intlanzi yakho iya kuba noxinzelelo olungeyomfuneko. Oku kungenxa yokuba iiparamitha zamanzi ziyaguquguquka. Ungaze utshintshe ngaphezulu kwe-50% yamanzi ngexesha elinye, njengoko oku kunokubulala iintsholongwane eziluncedo kwi-aquarium.
Ngokuqhelekileyo, zilandelayo zezinye zeendlela onokuthi uzixelele ukuba iintlanzi zakho zonwabile. Baqubha emva naphambili ngokukhululekileyo nangamandla bajikeleze itanki. Ngokufana nabantu, iintlanzi ezonwabileyo zinokuba nokukhanya okuqaqambileyo eluswini lwazo. Azibonakali zoyika ezinye iintlanzi ezisetankini. Baphefumla ngokuqhelekileyo.
Ukuba intlenga iye yashukuma, amanzi anokucocwa ngekhemikhali ngeklorini kunye/okanye abiliswe phambi kokuba asetyenziswe. Olona lungiselelo lungcono kukuba neetanki ezimbini kwaye zicoceke ngokutshintshana. Ezinye iindlela zokucocwa kwamanzi zisenokusetyenziswa, ezifana nokubulala iintsholongwane ngokukhanya kwe-ultraviolet (UV) okanye ukuhluzwa.
Guqula i-10% yamanzi akho e-aquarium veki nganye okanye i-25% rhoqo kwiiveki ezimbini. Amanzi atshintshiweyo kufuneka abe ngubushushu obufanayo namanzi e-aquarium. Ngalo lonke ixesha uphatha amanzi etephu nge-conditioner yamanzi ukuze unciphise i-chlorine kunye ne-ammonia ngaphambi kokuba uyifake kwi-aquarium. Guqula iikhatriji zokucoca kanye ngenyanga.
Amanzi ompompo aqhelekileyo alungile ngokuzalisa i-aquarium logama nje uyivumela ukuba ihlale iintsuku ezininzi phambi kokuba wongeze intlanzi (iklorine emanzini etephini iya kubulala intlanzi). Luluvo olulungileyo ukuvumela isihluzo siqhube iveki phambi kokongeza intlanzi etankini.
Ubukhulu becala, ukondla intlanzi yakho kanye okanye kabini ngemini kwanele. Abanye abantu abanomdla wokuzilibazisa bade bakhawuleze intlanzi yabo enye okanye iintsuku ezimbini ngeveki ukubavumela ukuba bacoce iinkqubo zabo zokugaya. Intlanzi enkulu, ehlalayo inokuhamba ixesha elide phakathi kokutya kuneentlanzi ezincinci, ezisebenzayo.
Ngokuqhelekileyo ufuna ukulinda ubuncinane iiveki ezimbini phakathi kokwazisa izongezo ezintsha kwitanki yakho yeentlanzi. Oku kunika ixesha lokuba isihluzo sebhayoloji sibanjwe kwakhona. Eli xesha likwavumela intlanzi entsha ukuba iqhele itanki yeentlanzi, kunye nentlanzi endala, esele iqinisiwe ukuba iqhelane nezongezo ezintsha kwitanki yakho yeentlanzi.
Umbuzo: Ungayekisa njani ukuphuphuma kwamanzi kwitanki yeentlanzi
Ngaba i-Fish Tank Water Conditioner yenza amanzi eTanki abe Murky
Umbuzo: Ingakanani iTanki yentlanzi yamanzi etshintshayo
Mangakanani amanzi atshintsha itanki yeentlanzi
Indlela yokuphatha amanzi eTanki yeentlanzi
Uwakhupha Njani Amanzi eTanki yeentlanzi
Umbuzo: Uwahluza njani Amanzi eTanki yeentlanzi
Impendulo eKhawulezayo: Ngaba iintlanzi zineTanki yamanzi
Umbuzo: Ngaba unakho ukusebenzisa iTanki yeentlanzi zaManzi ezithambileyo zaManzi
Ingakanani i-Conditioner yamanzi kwiTanki yeentlanzi
Umbuzo: Ingakanani i-Amoxicillin yentlanzi yeTanki ye-Aquarium yamanzi
Mangakanani Amanzi Kwitanki Leentlanzi